Sekuyisikhathi eside imidlalo Ikhompyutha kwaba olunye lwezimpawu yesimanjemanje. abadlali abaningi basebenzisa kubo ezinkulungwaneni noma amahora unyaka ngamunye. Ngeshwa, azikho amaphrojekthi amaningi ukuze ungakwazi "ukubulala" ngesonto ezingaphezu kweyodwa, kodwa hhayi kancane ngakho musa uzisole. Skyrim - omunye okumbalwa.
Kodwa ngisho umdlalo best ukuphela kungafika ngizithola, ngakho abadlali njalo ekufuneni izindlela self-ngcono. Fashion, isibonelo. Banezela umdlalo kweqembu okuqukethwe okuhlukile, okwenzeka ngisho izikhathi eziningana ukuba bahlole amazinga kuba ezithakazelisayo nokunye okuningi. By the way, indlela ukusetha fashion "Skyrim"? Ake sizoxoxa ngalo mbuzo kulesi sihloko.
Kuyini imayelana nani?
Njengoba sekushiwo, ngaphansi ukuguqulwa iqoqo okuqukethwe ekhethekile, okuletha ezihilelekile eziningi amathuba amasha. Ukulungiswa banganezela ke, hhayi kuphela izikhali banal noma indlela esizwakala kangcono, kodwa ngisho wonke amazinga, izimfuno nezinhlamvu. Ikakhulu sibonga kubo Morrowind efanayo namanje ngokuqinile kunesithembiso entendeni phakathi RPG-imidlalo, nakuba kusukela ukukhululwa walo eminyakeni eminingana edlule!
Ngakho indlela ukusetha fashion "Skyrim"? Manje sizoxoxa kahle ngalokhu.
Olunye ulwazi ebalulekile
Okokuqala udinga ukubheka isayithi lapho lezi ukulungiswa ayatholakala. Ngaphambi kwalokho, kuyoba usizo ukuba uhlole izinkundla thematic, njengoba zivamise "kuhloswe" kuzinto ezinhle. Kodwa akufanele sicabange ukuthi kuyoba okwanele nje unzip kumafayela alandiwe lwemibhalo nge umdlalo. Njengomthetho, kumele baphonse in a lwemibhalo ngokukhethekile okudalwe. Ukuze uqonde kangcono lokhu, kubalulekile ukuba ukuqhuba uhambo emfushane phakathi geymdeva emhlabeni.
Ngaphambi ukuthi ungasetha kanjani fashion ku "Skyrim", kufanele uqaphele database esikhulu, equkethe konke okuqukethwe game. It is igcwele amafayela ne .bsa isandiso. Umbuso indawo ekhethekile "FO3 Ingobo yomlando Umfelandawonye" usumisiwe 'ekhaya "ngoba ukukhipha izimpahla zabo. Thola amafayela idatha kungaba lwemibhalo mdlalo, kwifolda ngokuthi Data.
Uhlu zomlando nge game okuqukethwe
ifayela Meshes.bsa kubaluleke kakhulu, ngoba awafaka konke imodeli unhlangothi-ntathu zezwe virtual. It wenza okufanayo ifayela umsebenzi Textures.bsa, equkethe yonke indlela yokwenza. Ingobo yomlando Misc.bsa amanga yonke imisindo ezenzeka emdlalweni. A indima efanayo udlalwa ngu Sounds.bsa, lapho kukhona iculo kakhulu ezihambisana wonke Gameplay.
Ukuze abadali Mods kubaluleke kakhulu ingobo yomlando Shaders.bsa, ngoba kuwo wonke shaders amageyimu. Ekugcineni, ngo-Animations.bsa ngokuqinile phama zonke izithombe, okungase kuphela ezitholakala umdlalo. Kungani sonke lesi ukukutshela? Iqiniso lokuthi yonke okuqukethwe okulandiwe kuphela (!) Kusukela ifolda Data! Kumele kukhunjulwe, ukubeka imfashini.
Ngaphambi ukuthi ungasetha kanjani imfashini ku "Skyrim", qiniseka unzip ingobo yomlando okuqukethwe edingekayo, futhi ayethanda le njongo, sebenzisa WinRAR archiver noma (7-ZIP, ngokwesibonelo), okuyinto eye esakhelwe ukulungisa iphutha kokucindezelwa. Lokhu kubaluleke kakhulu, njengoba iphutha kancane kungaholela ukungakwazi ephelele ukusebenzisa umdlalo.
Through the mlando Ufaka okuqukethwe in kwifolda Data. Isexwayiso! Akunakusetshenziswa musa ukuqamba kabusha amafolda ezisesandleni ingobo yomlando! Naphezu engenangqondo ka isenzo esinjalo, abanye abasebenzisi imfundamakhwela ngasizathu simbe ucabanga ukuthi esikhundleni the gama "kucace kakhudlwana" akukho nemiphumela ngeke babe.
Nakhu ukuthi ufake Mod. "Skyrim 5" kule ndaba kulula kakhulu imidlalo ngaphambili ochungechungeni, njengoba cishe akukho ukucushwa lutholakala. Nokho, i-"ukucaciseleka" sizobe ubeke amazwana imodi Inqubo yokufaka, okusenza umdlalo izikhali ezintsha kanye nemishini. Qaphela ukuthi lokhu kuphela isibonelo, njengoba ungakwazi ukuthatha noma yisiphi uthanda ukuguqulwa.
Konke umniningwane kancane ngaphezulu ...
Cabanga inqubo yokufaka ngokulanda ukuguqulwa "Izinkemba Billiro". Nokho, ungakhetha, neminye imicimbi, kusukela ngokuyisisekelo lokhu akuzange kushintshe. "Ihlaziya" ifayela ezingaphezu kuka-14 megabytes kancane, ukuze izinkinga ngokuthola akufanele kube, ngisho nalabo abasebenzisi ukuya inthanethi ngokusebenzisa USB-imodemu.
Vula Download Imodi nganoma iziphi yomlando evamile, ungabona amafayela eziningana, ngamunye okuyinto isampula izikhali noma imishini. Ngaphezu kwalokho, kuhle ukufunda ifayela idokhumenti ifayela. It hhayi kuphela imininingwane yenqubo kokubekela fashion, kodwa ngisho ulwazi mayelana nokuqukethwe ukuthi unezela umdlalo.
Incazelo ukulungisa amafolda
Njengoba lwemibhalo "Skyrim", e-archive ifayela elandiwe ine Idatha ifolda, okuyinto evulekile, ungakwazi lokuzizwela nezinye ekuqukethe: Izincwajana amabili anamagama anezikhala kanye ukucolisakala. Njengoba ungase ukuqagela, omunye equkethe onobuhle ezintathu-ntathu of izinkemba, kanye nezinye - ukuthungwa yabo.
Nazi ezinye izinhlu, kanye ifayela ebizwa abmod.esp futhi kumele aphonse kufolda Data. Isexwayiso! Uma uke wathenga umdlalo Umusi, kuyothiwa elise kwenye indawo. Kulokhu, kulapha ngaleso ikheli: C: \_ Program Files \_ Steam \_ steamapps \_ ezivamile \_ Skyrim.
Ngokuvamile, ngokuphathelene Umusi, kufanele ilalele kakhulu nempikiswano ukuphepha kwe-akhawunti yakho. Uma sikubeka kalula, Valve inkampani ngokuvamile uvala abadlali ababeka imfashini, futhi ngenxa yalokho kungcono ukuba uxhumane bokusebenza kahle sibone ukuthi ukubeka ukuguqulwa ethize uvunyelwe.
Uma kungenjalo, ngeke nje ngaphandle izinkemba entsha, kodwa ungahlukaniswa ngokuvamile ube bazivalele "isisusa". Qaphela ukuthi mBhalo, ungase uthi ngokuphepha goodbye ngayo yonke imidlalo ifakiwe, njengoba i-akhawunti awabuyiswanga.
Yini okufanele ngiyenze ngemuva kokufaka?
Kubonakala ukuba lutho nzima. Kodwa kanjani ukuze uqiniseke ukuthi okuqukethwe vogue akazange avele umdlalo? Lokhu akuyona omkhulu kakhulu idili. Uma ozifakile ukuguqulwa, vula lwemibhalo Skyrim, lapho SkyrimLauncher.exe ukuthola ifayela, bese uchofoza ku-ke inkinobho yegundane kabili ngakwesokunxele. Qalisa ibhokisi lengxoxo, lapho kudingeka chofoza "Amafayela" ithebhu, bese ukhetha kusukela iconsi uhlu izenzakalo, okuyinto isanda efakwe nguwe!
Nakhu ukuthi usethe fashion "Skyrim"! Wena nje kufanele uqale umdlalo futhi sibheke expanses yayo enkulu indawo lapho kuzobe kudayiswa izinkemba, okwakukhona ingxenye fashion.